Kucelwe uMkhwebane ukuthi aphenye ngo-R30m ‘owatholwa’ uMolefe | News24
Kucelwe uMkhwebane ukuthi aphenye ngo-R30m ‘owatholwa’ uMolefe
Pretoria – Iqembu eliphikisayo, iDA, ishaya amakhala ngesamba semali engu-R30 million okusolwa ukuthi yagixabezwa lowo owayeyi-CEO yakwa Eskom, uBrian Molefe, yinkampani ephehla amandla kagesi kuleli, u-Eskom.
I-DA kanye neSA National Civic Organisation (Sanco) babuza ukuthi u-Eskom umnikezeke ngaliphi uMolefe le samba semali engaka ekubeni ubesasebenze izinyanga ezingu-18 nje kuphela eqhoqhobele lesi sikhundla. Ngaphezu kwalokho lezi zinhlangano sezicele uMvikeli woMphakathi, uBusisiwe Mkhwebane, ukuthi aphenye kulandela imibiko yabezindaba ethi ngokwemithombo ekwa-Eskom, uMolefe ugixabezwe ngalesi samba semali ngoMashi.
UMolefe wasula isigubhukane kulandela ukuphuma kombiko walowo owayenguMvikeli woMphakathi, uThuli Madonsela, ngezinsolo zokulawulwa kombuso nalapho kwathinteka khona negama lakhe.
OLUNYE UDABA: I-DA ithi izovulela icala uBrian Molefe
Obhekelele izindaba zamabhizinisi kahulumeni kuDA, uNatasha Mazzone, uchaze lokhu kukhokhwa kwale mali, njengoba kubikiwe kwiphephandaba langeSonto, iSunday Times, “njengokuxhashazwa okukhulu kwezimali zomphakathi”, wathi uMkhwebane kuzomele aphenye lokhu “….”
Uthi akwamukelekile neze ukuthi imali yabakhokhi bentela ilokhu isetshenziswa ukuzuzisa izikhulu zikahulumeni ezishaya udaka futhi ezingafanelwe, ekubeni imisebenzi ebalulekile nengqalasizinda igcwala izintuli ngenxa yokuma yokuma komsebenzi.
I-DA ithi kuyacaca ukuthi lena bekungesiyona inkokhelo yempesheni njengoba uMolefe esho, yabe isinxusa uMolefe ukuthi ayibuyise ngokushesha le mali.
UMolefe utshele iSunday Times ukuthi wakhokhelwa imali okwakumele akhokhelwe yona.
Ngakolunye uhlangothi u-Eskom ubungakaqinisekisi ukuthi yimalini ekhokhelwe uMolefe, kodwa wathi kuzovela embikweni wawo waminyaka yonke ozokhishwa ngoJuni.